Misaona An’ilay “Renibe” Nancy Hatch Dupree, Maty Teo Amin’ny Faha-90 Taonany i Afghanistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2017 6:25 GMT
Omid Sharifi: Manao sary hosodokon'i Nancy Dupree ny Afgàna, miantso azy hoe “Ny maherifoko. Mpiambina mahatoky ny kolontsain'i Afghanistan.”
Niasa dimampolo taona tamin'ny fiarovana ny lovan'i Afghanistan tamin'ny faharavana nateraky ny fanafihan'ny Sovietika, ny ady an-trano sy ny vanim-potoana Taliban Ilay mpahay tantara Amerikana Nancy Dupree. Tsy adinon'ireo olom-pirenena ao amin'ny firenena ny ezaka feno herimpo nataony raha namoy ny ainy izy tamin'ny fiandohan'ity volana ity tao Kabul renivohitra.
Na dia tamin'ny faha-90 taonany aza, mbola nifantoka tamin'ny fitantanana sy fikarakarana ny Afghanistan Center Kabul University (ACKU) misy ireo antontan-taratasy Afgàna 60.000 i Nancy Dupree. Nanoratra torolalana dimy momba an'i Afghanistan izy, ary namoy ny ainy taorian'ny tolona naharitra ela tamin'ny aretin'ny fo, ny voa ary ny havokavoka tao amin'ny hopitaly iray tao an-tanànany.
Andro vitsy taorian'ny nahafatesany, nanatrika ny lanonana fanomezana voninahitra azy, sy nankasitraka ny lova navelany ireo manampahefam-panjakana Afgàna miaraka amin'ireo diplaomaty vahiny, mpiara-miasa sy namana tao amin'ny Afghanistan Center Kabul University nanaovana ny lanonana.
Nanangona boky sarobidy marobe, sarintany, sary tamin'ny vanim-potoanan'ny ady sy fandraketana vitsivitsy misy ny mozika malaza tao amin'ny ACKU izay toerana nonenany ihany koa izy. Ankehitriny, tsy misy miasa intsony ny birao niasany, saingy nomem-boninahitra.
Biraon'i #Nancydupree ao amin'ny ACKU, ora vitsy taorian'ny nahafatesany
Nisaona an-dRamatoa Dupree ny Afghana tamin'ny alalan'ny fandefasana lahatsoratra fiaraha-miory tamin'ny media sosialy. Samy naneho ny alahelony noho ny fahaverezany ny filoha ankehitriny sy ny teo aloha, ary koa ireo olom-pirenena tsy tambo isaina.
Mpanao gazety Afghana Sattar Saeedi nampahafantatra ireo mpanjohy azy momba ny fahafatesan'i Dupree tao amin'ny Twitter.
Namoy ny ainy ilay reniben'i Afghanistan
Misaotra anao Nancy noho ny nataonao tamin'ny kolontsaina sy ny vakok'i Afghanistan. Mandria am-piadanana. Sary hosodoko 54sms hanomezam-boninahitra ny fahatsiarovana azy ao Kabul.
Tahaka ireo mpanao politika Afghana maro, nandefa sary niaraka taminy ny Tale Mpanatanteraka Dr. Abdullah.
Tena nalahelo noho ny fahafatesan'i #NancyDupree. Manome lanja sy manaja ny asany ho an'i #Afghanistan nandritra ny am-polony taona ny Afghana. Ho banga anao izahay. Mandria am-piadanana Nancy
Lina Rozbih, mpanao gazety Afghana nandefa ny sarin'i Dupree mitafy akanjo Afghana.
She was Mother Teresa of Afghanistan #nancydupreepic.twitter.com/WCBt15oUKN
Reny Teresa an'i Afghanistan izy
Nampahatsiahy ny fandravana nataon'ny Taliban tamin'ny sarivongana Buddha,Bamiyan izay nampitomany an'i Dupree ny mpisera Twitter iray hafa.
Iray amin'ireo fitiavana sy fankafiazana vitsy tsy misy fepetra ho an'i Afghanistan.
Tonga tao Afghanistan amin'ny maha vadina Diplaomaty Amerikana tamin'ny taona 1962 i Dupree. Teraka sy lehibe tany India, nahazo mari-pahaizana tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa tao Mexico City i Dupree ary nianatra tao amin'ny Kolejy Barnard sy ny Oniversiten'i Columbia, nianatra ny tantara Sinoa.
Nanomboka nanoratra momba an'i Afghanistan izy taoriana kelin'ny nahatongavany teto amin'ny firenena, izay nifankahitany tamin'i Louis Hatch Dupree, arkeôlôgy sady anthropologista, izay lasa mpamoaka lahatsorany taty aoriana. Samy nanambady ry zareo tamin'izany fotoana izany, saingy nisara-panambadiana tamin'ny vadiny avy ary nandany taona maro niara-nitety an'i Afghanistan. Nitondra ny lazan'izy ireo iraisam-pirenena ny bokin'izy ireo momba an'i Afghanistan mitondra ny lohateny hoe “Five o'clock Follies”.
Raha nalefa tany Afghanistan ny tafika Sovietika tamin'ny taona 1979, voatery nandao ny firenena ry Duprees. Nogadraina nandritra ny fotoana fohy i Louis raha niampanga azy ho mpitsikilon'ny CIA ny governemanta komonista.
Raha tokony niverina tany Etazonia, nifindra tany Peshawar, Pakistan, toerana ho an'ireo Afghana nafindra toerana izy ireo. Tezitra mafy izy ireo tany raha nahita fa namidy sy nampiasaina handrehetana afo ny antontan-taratasy sy boky misy ny soatoavina ara-kolotsaina.
Mba hitazonana antontan-taratasy sy boky marobe araka izay azo atao, nanangana ny Biraon'ny Fandrindrana ny Fanampiana an'i Afghana izy ireo ary nanangona izay antontan-taratasy rehetra mifandraika amin'ny tantara sy ny kolontsainan'i Afghanistan.
Matin'ny homamiadana tamin'ny taona 1989 i Louis Dupree, tamin'ny fotoana indrindra nialan'ny Sovietika tao Afganistana, saingy nanohy ny fomba fijeriny i Nancy. Niandry ny ady an-trano sy ny fibodoan'ny Taliban an'i Pakistana, niezaka nitazona ny lovan-tsofin'i Afghana tamin'ny alàlan'ny fanangonana fifandraisana tamin'ireo manampahefana Talibana azoazo izy, na dia tsy nahitam-bokany lehibe aza izany.
Tamin'ny taona 2005, niverina tany Kabul i Nancy, nitondra ny zavatra nangoniny tanaty gony nandritra ny fijanonany tao Peshawar.
Tranobe vita amin'ny marbra, vato ary sedera Afghana, nanjary seranan-tsambo azo antoka ho azy ny Afghanistan Center Kabul University. Ao no misy ireo boky, sary, sarintany sy antontan-taratasiny tsy fahita firy nangonin'izy sy Louis ary natao nomerika mba hahafahan'ireo oniversite hafa any an-tanàn-dehibe tahaka an'i Herat, Kandahar, Jalalabad, ary Mazer-e-Sharif miditra amin'izany.
Nanohy nitantana antontan-taratasy an'arivony milaza momba ny ady sy ny korontana ara-politika nandritra ny taona maro, ny asan'ny mpitsoa-ponenana sy ny firotsahan'ny iraisam-pirenena an-tsehatra tao amin'ny firenena ravan'ny ady i Dupree.
“Iray amin'ireo ifantohantsika ny hampiroborobo ny hevi-dehibe rehetra sy ny fomba fanao amin'ny fanaovana fikarohana marina,” Hoy i Dupree tamin'ny the Guardian tamin'ny taona 2013.
Nametraka ny Louis sy Nancy Hatch Dupree Foundation ihany koa izy, izay mikendry ny hampiroborobo ny tantara sy ny kolontsaina ao Afghanistan.
Nandritra ny resadresaka nifanaovany tamin'ny Washington post, nanazava ny antony manosika ny fikambanany hitolona amin'ny fanamafisana ny vakoka Afghan izy.
“Ny ezahinay atao dia manaparitaka ity hevitra ity fa ny fananana ny maha-izy azy no mampatanjaka anao,” hoy izy.